111 tratry ny coronavirus Ankizy maromaro lasibatra
Miampy iray ny tranga izay nampiakatra ho 111 ny fitambaran’ny voa, ka zazalahy 14 taona any Toamasina io vaovao io.
78 ny olona mbola manaraka fitsaboana satria nisy 4 sitrana, ka ny 3 tany Toamasina, ary iray teny Anosiala, ka niakatra ho 33 izany ny sitrana. Tsy vao io no nisy ankizy voa satria efa nisy zaza roa 4 taona sy 12 taona ihany koa tao Toamasina. Tsy tsy mitsahatra miakatra ny isa na somary miadana aza. Maro ny tranga mampiahiahy hoe: iza no namindra tamin’ilay olona tetsy Antetezanafovoany sy Faravohitra ohatra? Mety mbola maro ireo voa mieloelo any. Adihevitra hatrany ny hoe nahoana no mbola tsy havoaka ireo tsy misy soritr’aretina. Na misy soritr’aretina na tsia dia tazonina any amin’ny hopitaly. Ny coronavirus tsy voatery hisy soritr’aretina na misy ihany aza ho an’ny sasany: mikohaka, tsy mahare fofona, mafana hoditra,… Nisy ny nampiasana oxygène sy natao fameloman’aina teto Antananarivo, Toamasina, izay tao ny nampatahotra mihitsy. Nisy tamin’ireo sitrana aza no efa tratran’izany. Mamindra foana rehefa “positif” na tsy misy soritr’aretina aza. Olona jerena matanjaka eny an-dalambe eny an-tsena eny, dia mety efa misy voa ary mamindra. Misy foana ny risika, toy ny fahaseporana tampoka. Misy ohatra nandritra ny fito andro tsy nisy soritr’aretina, saingy sempotra rehefa nisy fiomboana ny aretina. Ireny no mety ho faty raha sanatria tsy misy fandraisana an-tànana haingana raha amin’ny fihetsehana, ka izay no hitazonana azy any amin’ny hopitaly, hoy hatrany ny Pr Vololontiana Hanta Marie Danielle. Miditra amin’ny herinandro fahaefatra isika, ka nisy ny fanentanana nataon’io profesora io ny hanajana ny fepetra. Isan’izany ny fanaovana aro-tava foana rehefa mivoaka, ary tsy hesorina. Eo ihany koa ny fanasana tànana matetika amin’ny rano sy savony.